YouTube: Maitiro Ekupa Iyo Yako Agency kana Videographer NeMushandisi Kuwana Kune Chiteshi Chako Martech Zone
Zvakare zvakare, ndiri kushanda nebhizinesi riri kusiya agency uye richishanda neni ku gonesa kuvepo kwavo kuYouTube… Uyezve, iyo agency yavaishanda nayo ine muridzi weayo ese maakaunzi. Ndanga ndichigunun'una nemasangano anoita izvi kweanopfuura makore gumi ikozvino nekupa zano mabhizinesi kuti asamboite izvi. Kana bhizinesi harifanirwe kupihwa mukana wekupinda nepassword kugadzirisa chero account.
Nzira dzakakodzera dzekuita chero basa rebazi kushandisa mashandiro emabhizimusi emapuratifomu makuru, kubva kune vanyoreri vemasimba, webhu inomiririra, kuenda kumasocial network kupa yako agency ne maneja kuwana asi usatombobhadharisa uye muridzi kuwana. Ukasadaro, panogara paine mukana wekuti iyo agency newe muve nekudonha uye zvinonetsa kudzoka muridzi kana mukana weanotevera agency. Kana zvakatonyanya, iyo agency kana chipangamazano wauri kushanda naye anogona kubuda mubhizinesi kana kusawanikwa kana iwe uchichida. Usaise bhizinesi rako panjodzi seizvi!
Nhasi, ini ndichakufambisa nenzira yekupa mukana kune yako agency kana videographer pane yako YouTube Chiteshi nekuvawedzera semaneja wechiratidzo chako paGoogle.
Maitiro Ekuwedzera Maneja Pane YouTube
Google yanga ichingogadzira zvishoma nezvishoma nzvimbo uye sarudzo kune ese masevhisi avo kwaunogona kuve neaccount account uye wobva wawedzera vashandisi pasi peiyo account iyo inovapa mukana wakaringana. Kubatsira kweizvi kuri nyore:
Iwe hausi kupa akaomesesa logins uye mapassword uye kuvimba nesangano rako kuvachengetedza.
Hausi kupa muridzi kune yako agency, saka hapana nyaya kana ukafunga kuenda. Iwe unongopinda uye bvisa kwavo kuwana semaneja.
Sangano rako rine kukwana kuwana manejimendi, vasina kuwana maficha avanofanirwa kunge vasina kuita sekubhadharisa, manejimendi manejimendi, kana muridzi
Matanho Ekuwedzera Sangano kana Videographer Kugadzirisa Yako YouTube Chiteshi
Open YouTube Studio uye tinya marongero muzasi kwemenyu yekuruboshwe.
Sarudza Mvumo pane yako Settings Menyu uye tinya Tonga Mvumo. Ungangoda kupinda muaccount yako apa Google ichisimbisa kuti ndiwe muridzi.
Iye zvino wave mune yako brand account nhoroondo uye inogona kusarudza maneja mvumo yevashandisi vako.
Pamusoro kurudyi, tinya icon kune Koka Vashandisi Vatsva.
Wedzera Vashandisi Vatsva zvino zvinokugonesa kuwedzera email kero pamwe nebasa ravo kuaccount yako. Kurudziro yangu yesangano kana videographer angave ekuvawedzera se meneja.
Ndizvozvo… izvozvi mushandisi wako anogashira email ziviso kwavanogona kugamuchira basa ravo uye votanga kubata yako YouTube Chiteshi!
Tags: wedzera maneja kune youtubeaccount accountgoogle brand accountsei kutimaneja mvumo muYouTubeYouTubeAkaundi yemhando yeYouTubeYouTube mugeroYouTube chiteshi manejayoutube kushambadziraYouTube mvumoMushandisi weYouTubeYouTube mvumo yemushandisi